मदन भण्डारी राजमार्गको दुधौली खण्डमा दुर्घटना – Dudhauli News
दुधाैली न्यूज — २ आश्विन २०७६, बिहीबार १९:४४ add comment
एकै स्थानमा धेरै दुर्घटना, धेरै घुम्ती सडक निमार्णनै त्रुटी भएको भनाई
असोज २, दुधौली न्युज
हरी गाँउले –
मदन भण्डारी राजमार्गको सिन्धुली खण्डमा ना ४ ख ७१०९ नं. को पिकअप भ्यान दुर्घटना भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका सिन्धुली खण्ड स्थित दुधौली नगरपालिका वडा नं. २ भलुवाहीमा पिकअप भ्यान दुर्घटना भएको हो । विहिवार साँझ भएको दुर्घटनामा एक गम्भीर घाईते भएका छन् । पिकअप भ्यानमा चाकल सहित ८ जना सवार थिए ।
दुधौली नगरपालिकाकै गागन बजार बाट कमलामाई नगरपालिका भिमान बजार जाने क्रममा व्यापारीहरु सवार रहेका पिकअप भ्यान तिव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । ति भिमानका व्यापारीहरु गागन बजारमा घुम्ती पसल राख्दै आएका थिए ।
घाईतेहरुको सनाखत भने हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छयस खण्डमा भाद्र महिनामा मात्रै ६ ओटा सवारी दुर्घटना भएको वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष रितेश राउतले जानकारी दिनुभयो । यस दुधौली २ को भलुवाही,बसनिया र रतनपुरमा मात्रै धेरै दुर्घटना भएका छन् । सडक निमार्णमा त्रुटी भएकाले यस खण्डमा धेरै दुर्घटना भएको वडा अध्यक्ष राउतको भनाई छ ।